Usaore moyo NeSocial Media | Martech Zone
China, August 11, 2011 NeChishanu, Nyamavhuvhu 12, 2011 Douglas Karr
Mumwe wevanhu vandinoenda munzira yangu kuti ndinzwe kutaura ndiJay Baer. Mangwanani ano ndanga ndichifanirwa kumuka zuva risati rasvika kuti ndifambe nemota kusvika BlogIndiana kuti anzwe hurukuro yake - uye yainge yakakodzera rwendo rwacho. Kune zvikonzero zvakati wandei. Jay ane makore makumi maviri ane ruzivo semushambadziri uye haanyari kutaura maonero ake. Jay zvakare munhu chaiye - hapana mutsauko pakati pekuti ndiani waunoona pachikuva uye waunosangana naye pachiso. Zvakare, mushure mekuona Jay achitaura kane gumi nemaviri nguva, ini handina kuona iwo iwo iwo mharidzo kaviri.
Ini ndanga ndichichema kuna Jay kuti ndanga ndichida kuziva kuti mamwe mabloggi anga ari madiki sei pane angu anga achigamuchira mamwe maratidziro, kuda uye kutaurwa. Ndakatoshamisika, pamwe, kana vamwe vanhu vaitamba iyo indasitiri. Jay haana kufunga kuti vaive - anowana tani yetweets uye kugovana pasocial pane yake blog, Kugutsikana uye Shandura (a inofanirwa kuverenga!).
Ini handitende kuti mhando yemapositi ive iri nyaya - isu tinoremekedzwa kwazvo muindastiri yekushambadzira. Ini naJay takakurukura nezvehuwandu hwemotokari yandaiwana uye, tichienzanisa, blog yake inowana kuverenga kwakafanana. Nekudaro, vaverengi vake vane hukasha pa kugoverana ruzivo rwunoburitswa naJay. Kwete shoma - yakawanda kwazvo… avhareji mazana maviri ema tweets posvo!
Mukona yaJay mune zvemukati zvinoshamisa, hunyanzvi hwekutaurirana nemambure ake, uye nekuenderera mberi achitaura. Iye zvakare ane yakakura kwazvo inotevera paTwitter neFacebook kupfuura zvatinoita. Kwese kwakatenderedza, Jay ane mitsetse mishoma pamusoro pechangu chinzvimbo. Kana ndiri Kaputeni, iye Admiral. Ndinomuremekedza zvikuru.
Mukutaura izvi kunze, zvakave pachena kuti vanhu vanotevera Jay vane hukama hwakanyanya nemasimba makuru. Vanhu vanotevera Jay vari kumusoro kwepamusoro zvakare! Vazhinji vevateveri vaJay vane vateveri vakakura vega - uye vanoda kugovana nenetiweki. Uyu ndiwo mutsauko pakati pevateereri vangu naJay. Ini ndiri wemhando yenzungu nemabhaudhi murume ari kurwa iyo kunze nevashambadzi mumatangi. Kunyangwe isu tichikwezva vanhu veese mazinga edzidzo uye indasitiri yepamusoro ... iri blog nezve kushambadza.
Jay ane bhurogu nezve kushambadza futi, asi iye akanyanyisa kutarisisa uye akanatswa munzvimbo yemagariro enhau kupfuura ini. Isu takacheka yakafara swath… nezvose kubva analytics kuemail kushambadzira. Vateereri vandinosvika vanobatanidzwa, asi havana hunyanzvi hwekugovana kana kusimudzira zvirimo zvandinonyora. Vazhinji vevaverengi vangu havanyatso shanda munhau dzezvemagariro, vachitarisa zvakanyanya pakushambadzira kwechiratidzo uye kushambadzira.
Heino pfungwa yangu. Ini ndaiona-pfupi pandakanga ndochema nezve kuita kwangu zvemukati. Ini handifanire kuora moyo zvachose - ndinofanira kukurudzirwa kuti ndiri kutaura neboka rakabatanidzwa revaverengi vasina kusvetukira mune yemagariro venhau asipo kubva izvozvi. Ndinovimba ndinogona kuvabatsira kuti vasvike ikoko, asi zvinogona kunge zvisiri nhasi kana mangwana, zvinogona kunge zviri makore kure. Mambure ako anogona kunge akafanana, kunyanya kana usiri mumaindasitiri epamhepo. Usatore moyo sezvo iwe urikunyora toni yezvakanaka zvemukati asi zvinongogovaniswa nevashoma vanhu. Haasi munhu wese ane hukama sesu.
Aug 12, 2011 na5: 30 PM
Ndatenda. Ini handina kukodzera chero cheizvozvo, asi ndatenda.
Handina kumbobvira ndamhanya manhamba pane izvi zvakanyatsojeka, uye ndine chokwadi kuti kune vanobuda kunze, asi ndinotenda kuti ichokwadi zvisizvo. Zvandinoudza vatengi vangu vanoita blog ndezvekuti kudzikisira kwako zvemukati kutarisisa, zvakanyanya mukana wekukurudzira kugovana uye kunyorera maitiro, nekuti zvinowanzoita kuti muverengi anzwe kunge urikutaura zvakananga nezve mamiriro avo. Iko kutengesa-kurera traffic.
Hupamhi = vamwe vashanyi, kushoma kugovana + kunyoreswa
Narrow = vashoma vashanyi, vazhinji vachigovana + kunyoreswa
Damn, ikozvino ndinofanira kunyora blog blog nezve izvi futi! Kutenda nudge DK. Zvakanaka kukuona iwe senguva dzose!
Aug 12, 2011 na5: 55 PM
Izvo zvine musoro zvine musoro, Jay! Kutarisira mberi kune iyo posvo. Ngatitorei Mezcal Blanco munguva pfupi.
Aug 15, 2011 na4: 40 PM
Twitter inoramba iri nzvimbo yekutamba yevakadzidza uye vezvemagariro "twitterati." Ini ndinoteedzera vanopfuura zana vanhu mune yekushambadzira / yemagariro / tech nzvimbo yega, uye zvinogona kunge zvichityisa kugadzirisa zvese ruzivo. Zvizhinji zvemukati zvinopihwa retweeted zvinobva kune idiki diki subset. Taura nezve kuunganidzwa, ko isu nezvekuti titumidze zita racho kuwedzera. Chinhu chimwe chete chandingaudza Dick Costolo paTwitter ndechekuti "Tora Twitter kunze uko kune ruzhinji, mamina makuru asina kushambidzwa, ndipe mamirioni mazana mana evashandisi veTwitter, uye Wobva wataura nezvenzira inoshanda yemari." Asi kana zvasvika pane izvo imi varume zvamuri kuita, icho chinonyanya kukosha ndechekuti iwe unofanirwa kupa zvinobatsira, kufunga kunopisa nzwisiso, nguva dzose. Uye (dhiramu mupumburu) iwe unofanirwa, unongofanirwa kushamwaridzana nevateereri, kuburikidza nekutaura, pazviitiko, kwese kwese. Chaizvoizvo, mune dzakawanda zviitiko zvirevo zvandinoverenga kazhinji zvine zvakawanda zvakanaka mukati mazvo. Uku ndiko kutuka nekuropafadzwa kwechinamato senge chokwadi chemugove wedu.